ဒီနေ့မှာပဲ သူဟာ အသက်(၄၀)ပြည့်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း ပရိသတ်တွေကို အသိပေးလာတဲ့ အဆိုတော်ဟဲလေး – Cele Posts
ပရိသတ်ကြီးရေ ဂီတလောကမှာ တေးသီ ချင်းပေါင်းများစွာကို ဆယ်စုနှစ် နှစ်စုတိုင်အောင် ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးရေးသား သီဆိုနေတဲ့ အဆိုတော်ဟဲလေး ဟာဆိုရင် ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အားပေး ချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝသိမ်းပိုက်ရရှိထား တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဟဲလေးဟာဆိုရင် သူချစ်ရတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေအပေါ် တလေးတစား ဆက်ဆံတတ်တဲ့ အပြင် လူတိုင်းကိုလည်း ကူညီချင်စိတ်ရှိသူ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့အပြင် ဘာသာတရား ကိုလည်း ရိုသေကိုင်းရှိုင်း သူလည်းဖြစ်ပါ တယ်။
အဆိုဝါသနာပါတဲ့ မျိုးဆက်သစ် လူငယ်တွေ ကိုလည်းမြေတောင် မြှောက်ပေးနေပြီး လက်ရှိအောင်မြင်နေတဲ့ အဆိုတော် တစ်ချို့ရဲ့ လက်ဦးဆရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဟဲလေးရဲ့ သီချင်းဟောင်းလေးတွေ ကလည်း အခုချိန်ထိ ပရိသတ်​တွေရဲ့ အားပေးနားဆင်ခြင်းတွေကို ရရှိထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင် အခုလတ်တလောမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ ဆိုရင်လည်း မြန်မာပြည်ကြီး အမြန်ဆုံးပြန်လည်ငြိမ်းချမ်းစေရန် ဆုတောင်းပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ဟာဆိုရင်ဖြင့် ဟဲလေးရဲ့ အသက် ၄၀ ပြည့်တဲ့ မွေး နေ့လေး လည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့ Facebook စာမျက်နှာပေါ် မှာတော့ “ဓါတ်ပုံထဲက.. ပူတူတူးလေး🥰 ဒီနေ့..အသက်၎ဝပြည့်ပါတယ်🥰🎂🥰 Happy Birthday to Me🥰🎂🥰 ” ဆိုပြီး ရေးသားကာ မွေး နေ့ကို ပရိသတ်တွေ အား အသိပေး လိုက်ပါတယ်။ ဟဲလေးကို ချစ်တဲ့ ပရိသတ်ကြီး ကော ဟဲလေးရဲ့ ၄၀ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့လေးကို ဆုတောင်းပေးလိုက်ကြပါအုံးနော်….
ဒီနမှေ့ာပဲ သူဟာ အသကျ(၄၀)ပွညျ့သှားပွီဖွဈကွောငျး ပရိသတျတှကေို အသိပေးလာတဲ့ အဆိုတျောဟဲလေး
ပရိသတျကွီးရေ ဂီတလောကမှာ တေးသီ ခငျြးပေါငျးမြားစှာကို ဆယျစုနှဈ နှဈစုတိုငျအောငျ ကိုယျတိုငျ ဖနျတီးရေးသား သီဆိုနတေဲ့ အဆိုတျောဟဲလေး ဟာဆိုရငျ ပရိတျသတျတှရေဲ့ အားပေး ခဈြခငျမှုကို အပွညျ့အဝသိမျးပိုကျရရှိထား တာပဲဖွဈပါတယျ။ ဟဲလေးဟာဆိုရငျ သူခဈြရတဲ့ ပရိတျသတျတှအေပျေါ တလေးတစား ဆကျဆံတတျတဲ့ အပွငျ လူတိုငျးကိုလညျး ကူညီခငျြစိတျရှိသူ တဈဦးဖွဈတဲ့အပွငျ ဘာသာတရား ကိုလညျး ရိုသကေိုငျးရှိုငျး သူလညျးဖွဈပါ တယျ။
အဆိုဝါသနာပါတဲ့ မြိုးဆကျသဈ လူငယျတှေ ကိုလညျးမွတေောငျ မွှောကျပေးနပွေီး လကျရှိအောငျမွငျနတေဲ့ အဆိုတျော တဈခြို့ရဲ့ လကျဦးဆရာလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဟဲလေးရဲ့ သီခငျြးဟောငျးလေးတှေ ကလညျး အခုခြိနျထိ ပရိသတျ​တှရေဲ့ အားပေးနားဆငျခွငျးတှကေို ရရှိထားတာလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဒါအပွငျ အခုလတျတလောမှာဖွဈပျေါနတေဲ့ အခွအေနတှေမှော ဆိုရငျလညျး မွနျမာပွညျကွီး အမွနျဆုံးပွနျလညျငွိမျးခမျြးစရေနျ ဆုတောငျးပေးနတောလညျးဖွဈပါတယျ။
ဒီကနဟေ့ာဆိုရငျဖွငျ့ ဟဲလေးရဲ့ အသကျ ၄၀ ပွညျ့တဲ့ မှေး နလေ့ေး လညျးဖွဈပါတယျ။ သူရဲ့ Facebook စာမကျြနှာပျေါ မှာတော့ “ဓါတျပုံထဲက.. ပူတူတူးလေး🥰 ဒီနေ့..အသကျ၎ဝပွညျ့ပါတယျ🥰🎂🥰 Happy Birthday to Me🥰🎂🥰 ” ဆိုပွီး ရေးသားကာ မှေး နကေို့ ပရိသတျတှေ အား အသိပေး လိုကျပါတယျ။ ဟဲလေးကို ခဈြတဲ့ ပရိသတျကွီး ကော ဟဲလေးရဲ့ ၄၀ နှဈပွညျ့ မှေးနလေ့ေးကို ဆုတောငျးပေးလိုကျကွပါအုံးနျော….
သူမဆေးရုံတက်နေချိန်မှာ လက်ရှိတွဲနေတဲ့ ချစ်သူပါ ရှိနေကြောင်း ပရိသတ်တွေသိအောင် ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ နေခြည်ဦး